Uzosebenza u-Stuart Baxter | News24
Uzosebenza u-Stuart Baxter
INHLANGANO engamele ibhola laseMzansi i-South African Football Association (Safa) iphinde yamangaza abalandeli abaningi bebhola kulelizwe ngesikhathi ibuyisa uStuart Baxter ukuthi aqeqeshe iqembu lesizwe futhi.
Noma izimpawu besezisobala ukuthi iSafa izogcina ikhalele kulomqeqeshi njengoba engomunye wezikhokho eziqeqesha e-Africa.
Into ethuse izwe indlela mhlawumbe ekwenzeke ngayo nangesikhathi esithathwe yilenhlangano.
Abadlali abadlala ngaleminyaka nabasengabaqeqeshi emazingeni ahlukene manje, bathi uBaxter akanikwe ithuba.
Umdlali wasemuva owadlalela iJomo Cosmos, Orlando Pirates neBafana Bafana uMark Fish uthi uBaxter ungomunye wabaqeqeshi abayaziyo iSouth Africa futhi uyahlonishwa, akanikwe ithuba asebenze ngokuthula.
“Ungumqeqeshi osezakhele igama la eMzansi nosetshengisile ukuthi uyayazi into ayenzayo.
Akayekwe nje asebenze ngokuthula,”kusho uFish.
OwayenguKaputeni weBafana Bafana neLeeds eNgilandi uLucas “Rhoo”Radebe uthi yena uyacabanga ukuthi uSafa uzame ngayo yonke yonke indlela ukuthola umqeqeshi ofaneleyo nongaqasheka.
“Mhlawumbe abantu bangathi bathathe isikhathi becubungula kodwa okumnandi ukuthi ugcine etholakele ozoqeqesha, akayekweke asebenze umqeqeshi,”kusho uRadebe.
Owake waqeqesha iBafana Bafana isikhathi eside neMamelodi Sundowns uTrott Moloto uthi uSafa kufanelwe unconywe ngokugcina umtholile umqeqeshi ngoba phela kufanelwe kuqalwe manje ukusebenza.
“Akungachithwa isikhathi kushiwo lokhu nalokhu. Umqeqeshi akayekwe enze umsebenzi wakhe ngoba usemkhulu bakwethu,”kusho uMoloto.
Noma kubukeka sengathi isikhathi sesihambile salomqeqeshi, kodwa kuzofanele aqiniseke ukuthi uMzansi uyaya kwi World Cup eRussia ngonyaka ozayo kanye naku Africa Cup of Nations eCameroon ngo 2019.